Abanye babasolwa ababanjwe kwesokukhiqiza izidakamizwa bangabokufika | News24
Abanye babasolwa ababanjwe kwesokukhiqiza izidakamizwa bangabokufika
Cape Town - Abasolwa abahlanu babanjwe ngamaphoyisa ngesikhathi eqhuba umkhankaso eKapa.
Laba basolwa, abathathu abangabokufika babanjwe nezibhamu zokuzingela kwatholakala nokuthi bebezenzele ifemu elikhiqiza izidakamizwa edolobheni elincane elingamakhilomitha angu-160 uma uphuma edolobheni laseKapa.
Okhulumela oKlebe kulesi sifundazwe uCaptain Lloyd Ramovha uthe lo mkhankaso ubuqhutshwa ngamaphoyisa asebenzela amayunithi ahlikahlukene kanti uqalwe ngoLwesine kwas e kwaba yizintatha zangoLwesihlanu.
Amaphoyisa aqonde ngqo epulazini eliseTouws River, eliyibanga elingu-160km kusukela edolobheni laseKapa.
OLUNYE UDABA:Udedelwe ngebheyili umlimi 'onefemu' lensangu
"Ngesikhathi kuhlolwa kulo muzi, kutholakale ilebhu ekhiqiza izidakamizwa zensangu-cocaine, Lysergic acid diethylamide (LSD), Methylenedioxyamphetamine (MDA), amaphilisi e-ecstasy kanye namathuluzi okukhiqiza," kusho uRamovha.
URamovha uthi kushaqwe izibhamu ezimbili zokuzingela, i-hand gun kanye nezinhlamvu, okusazohlolwa kubonakale ukuthi akukaze kusetshenziselwe ubugebengu.
Laba basolwa abahlanu, ababili badabuka kwelaseGermany, oyedwa ungowaseMalawi kanti ababili abakuleli baboshwe ngoLwesine ebusuku.
Laba basolwa baneminyaka ephakathi kuka-24 kuya ku-35 babhekene namacala okukhiqiza izidakamizwa nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni.